सस्तो SNCB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
सस्तो SNCB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू
घर > सस्तो SNCB ट्रेन टिकटहरू र यात्रा मूल्यहरू
यहाँ तपाईं बारे मा सबै जानकारी पाउन सक्नुहुन्छ सस्तो SNCB ट्रेन टिकटहरू र SNCB यात्रा मूल्यहरू र फाइदाहरू.
शीर्षकहरू: 1. ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा SNCB
2. SNCB को बारेमा 3. शीर्ष इनसाइट्स सस्तो SNCB ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
4. SNCB टिकट कति खर्च हुन्छ 5. SNCB ट्रेनहरू लिन किन राम्रो छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
6. पहिलो र दोस्रो वर्ग बीचको भिन्नता के हो?? 7. त्यहाँ एक SNCB सदस्यता छ
8. SNCB को प्रस्थान पहिले आउन कति समय 9. SNCB ट्रेन समय सारिणी के हो?
10. कुन स्टेशनहरु SNCB द्वारा सेवा गरीन्छ 11. SNCB FAQ
ट्रेन हाइलाइटहरू द्वारा SNCB
राष्ट्रिय ट्रेन कम्पनी, SNCB, सेवा गर्दछ 244 मिलियन यात्रुहरू वार्षिक रूपमा.
हरेक दिन, राष्ट्रिय ट्रेन कम्पनी ले लिन्छ 61 बेल्जियम भित्र हजारौं मानिस र यूरोप भर मा आफ्नो गन्तव्यहरु.
राष्ट्रिय रेलवे कम्पनी बेल्जियमको देशमा सबैभन्दा ठूलो गतिशीलता सेवा प्रदायक हो.
SNCB को बारेमा
बेल्जियमको राष्ट्रीय ट्रेन रेल कम्पनी, SNCB, मा स्थापित थियो 1926.
SNCB प्रस्तावहरु बेल्जियम भित्र रेल सेवाहरु र यूरोप भर. सहि टिकटको साथ, तपाईं सबै राम्रो देख्न सक्नुहुन्छ युरोपमा छुट्टी ठाउँहरू. टिकट र कार्ड सदस्यता को विभिन्न वर्ग संग, SNCB सबैको आवश्यकताहरू पूरा गर्दछ.
ट्रेनहरू लगातार ब्रसेल्समा – घेंट, एन्टवर्प – प्रयोग गरियो, ब्रसेल्स – नामुर. तपाईं युरोप भित्र छिमेकी देशहरूमा जान सक्नुहुनेछ SNCB रेलहरू प्रयोग गरेर.
निगम भर, close to 20,000 रेलवे र बस सञ्जालमा काम गरिरहेका कर्मचारीहरूले सुनिश्चित गर्छन् कि यात्रुहरू सुरक्षित रूपमा हरेक दिन उनीहरूको गन्तव्यमा पुग्छन्.
जाऊ त्यहाँ एउटा ट्रेन होमपेज बचत गर्नुहोस् वा खोजी गर्न यो विजेट प्रयोग गर्नुहोस् SNCB का लागि टिकट टिकटहरू
– एउटा ट्रेन आईफोन आईओएस अनुप्रयोग बचत गर्नुहोस्
शीर्ष इनसाइट्स सस्तो SNCB ट्रेन टिकट प्राप्त गर्न
नम्बर 1: तपाईंको SNCB टिकटहरू तपाईं सक्दो अग्रिम क्रम गर्नुहोस्
को मूल्य SNCB ट्रेन टिकट यात्राको दिन नजिकिँदै जाँदा बढ्छ. तपाईं आफ्नो SNCB ट्रेन टिकट प्रस्थान दिन देखि सकेसम्म टाढा बुकिंग गरेर केही पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ. SNCB ट्रेन टिकटहरू सकेसम्म चाँडो उपलब्ध छन्3को6महिना अगाडि रेल प्रस्थान. प्रारम्भिक बुकिंगले सुनिश्चित गर्दछ कि तपाइँ सबैभन्दा लागत प्रभावी SNCB ट्रेन टिकट पाउनुहुन्छ. तिनीहरू पनि संख्या मा सीमित छन्, छिटो तपाईं अर्डर, तपाईको लागि सस्तो. SNCB ट्रेन टिकटमा पैसा बचत गर्न, ASAP तपाईंको टिकट खरीद गर्नुहोस्.
नम्बर 2: SNCB द्वारा यात्रा अफ-पिक-पीरियड अवधिमा
SNCB ट्रेन टिकट सस्ता छन् अफ-शिखर अवधिहरूमा, हप्ताको सुरूमा, र दिनको घण्टाको बखत. तपाईं पक्का हुन सक्नुहुन्छ सस्ता रेल टिकट हप्ता भित्र. मंगलबार, बुधवार, र बिहीबार, SNCB ट्रेन टिकट सबैभन्दा किफायती छन्. बिहान र साँझ काम गर्ने यात्रुहरूको मात्राको कारण, रेल टिकटहरू ती घण्टाको अवधिमा बढी खर्च हुन्छ. यो बिहान पछि र साँझको कम्युटभन्दा पहिले कुनै पनि समयमा यात्रा गर्न सस्तो छ. हप्ताहरू रेलहरूका लागि अर्को शिखर अवधि हो, विशेष गरी शुक्रवार र शनिबार. SNCB ट्रेन टिकट मूल्यहरु पनि बढ्छ सार्वजनिक बिदा र स्कूल बिदा.
नम्बर 3: SNCB का लागि तपाइँको टिकटहरू अर्डर गर्नुहोस् जब तपाइँ तपाइँको यात्रा तालिकाको बारे निश्चित हुनुहुन्छ
SNCB ट्रेनहरू उच्च माग मा छन्, र थोरै प्रतिस्पर्धा संग, तिनीहरू हाल बेल्जियम मा ट्रेन को लागी शीर्ष विकल्प रहन. SNCB रेल टिकट प्रतिबन्धहरू सेट गर्न सक्दछ जुन उनीहरूसँग छ कि टिकट विनिमय वा फिर्तीलाई निषेध गर्दछ जबसम्म यो व्यवसायको प्रकारको टिकट छैन।. जहाँसम्म अझै फोरम वेबसाइटहरू छन् जहाँ तपाईं आफ्नो टिकट मानिसहरूलाई दोस्रो हात बेच्न सक्नुहुन्छ, SNCB दोस्रो हात टिकट बिक्री को लागी अनुमति दिदैन. यसले कसरी तपाईंको पैसा बचत गर्दछ? तपाईको टिकट मात्र अर्डर गर्नुहोस् जब तपाई आफ्नो तालिकाको निश्चित हुनुहुन्छ तपाईले दुई पटक एक टिकट बुकिंग गर्नबाट बचाउँनुहुनेछ किनकि केहि आयो र तपाईले मूल टिकट प्रयोग गर्न सक्नुहुन्न।.
नम्बर 4: तपाईंको SNCB टिकटहरू सेभ ए ट्रेनमा खरीद गर्नुहोस्
एउटा ट्रेन सेभ गर्नुहोस् सबैभन्दा ठूलो छ, सबै भन्दा राम्रो, र युरोपमा ट्रेन टिकटको लागि सस्तो सौदा. धेरै रेल अपरेटरहरु संग हाम्रो सम्बन्ध, ट्रेन टिकट स्रोतहरू, र हाम्रो टेक्नोलोजी एल्गोरिथ्मको ज्ञानले सस्तो ट्रेन टिकट सौदाहरूमा रेललाई ट्रेन पहुँच प्रदान गर्दछ. हामी केवल SNCB को लागी सस्तो ट्रेन टिकट डील प्रस्ताव गर्दैनौं; हामी SNCB का अन्य विकल्पहरूको लागि समान प्रदान गर्दछौं र हामी आफूलाई रेल बजारमा उत्तम ग्राहक सेवामा गर्व गर्दछौं.
ब्रसेल्स एन्ट्वर्प ट्रेन मूल्यहरु
एम्स्टर्डम एन्ट्वर्प ट्रेन मूल्यहरु
एन्ट्वर्प ट्रेन मूल्यहरूमा लिली
पेरिस एन्ट्वर्प ट्रेन मूल्यहरु
SNCB टिकट कति खर्च हुन्छ?
SNCB टिकट एक एकल रेल यात्राको लागि € २,5 बाट माथि € २० सम्म सुरू हुन्छ. द एक SNCB ट्रेन टिकट को मूल्य कुन प्रकारको टिकट किन्नुहुन्छ र कहिले तपाईले यात्रा गर्न छनौट गर्नुहुन्छ त्यसमा निर्भर हुन्छ:
मानक € 2,50 – € 15.00 € १ – € 30
प्रथम श्रेणी € 10.50 – € २० € २१ – € 46
SNCB ट्रेनहरू लिन किन राम्रो छ, र हवाइजहाजबाट यात्रा गर्नुहुन्न
1) तपाईं शहर केन्द्रमा आइपुग्नुहुन्छ. यो SNCB ट्रेनहरूको एक फाइदा हो जब हवाईजहाजको तुलनामा. SNCB ट्रेनहरू र सबै अन्य ट्रेन यात्रा जहाँसुकैबाट शहर बीचमा अर्को शहर को. यो तपाइँको समय र एयरपोर्टबाट शहरको केन्द्रको लागि ट्याबको लागत बचत गर्दछ. ट्रेन बिसौनी संग, यो सहरको कुनै पनि ठाउँमा पुग्न सजिलो छ जुन तपाईं जानु भएको थियो. तपाईं कहाँबाट यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भन्नेले खास फरक पार्दैन, ब्रसेल्स, एन्टवर्प, प्रयोग गरियो, वा लीज, शहर केन्द्र रोक्नु SNCB ट्रेनहरूको एक प्रमुख फाइदा हो!
2) हवाइजहाज बाट यात्रा को लागी तपाईको एयरपोर्टमा कम्तिमा तपाईको उडान समय भन्दा धेरै घण्टा सम्म हुनु पर्छ. विमानमा चढ्नु अघि तपाईंले सुरक्षा जाँचहरू पार गर्नुपर्नेछ. SNCB ट्रेनहरूको साथ, तपाईं बस भन्दा कम स्टेशन मा हुनु पर्छ 30 मिनेट अग्रिम. जब तपाइँ यो समयलाई पनि विचार गर्नुहुन्छ जब तपाईंलाई एयरपोर्टबाट शहरको बीचमा यात्रा गर्नको लागि लिन्छ, तपाईंले महसुस गर्नुहुनेछ कि SNCB ट्रेनहरू अझ राम्रा छन् कुल यात्रा समय.
3) सतह मा, SNCB ट्रेन टिकटको मूल्य बजेट एयर टिकट भन्दा बढी महँगो देखिन्छ. यद्यपि, जब तपाईं समावेश सबै शुल्क तुलना गर्नुहुन्छ, SNCB ट्रेन टिकट एक राम्रो मूल्य सम्झौता छ. सामान शुल्क जस्तै अन्य लागतहरूको साथ जुन तपाईंले रेलहरूमा भुक्तान गर्नु पर्दैन, SNCB द्वारा यात्रा गर्दै निश्चितको लागि उत्तम हो.
4) ट्रेनहरू अधिक पर्यावरण-अनुकूल छन् जब तपाईं रेल र हवाइजहाज तुलना गर्नुहुन्छ, रेलहरू माथि आउँथे. हवाइजहाजले ठूलो मात्रामा वातावरणलाई प्रदूषित गर्छन् उनीहरूको उच्च स्तरको कार्बनबाट. तुलनामा ट्रेनहरूले धेरै दिन्छन् कम कार्बन प्रदूषण हवाइजहाज भन्दा.
पहिलो र दोस्रो वर्ग बीचको भिन्नता के हो??
त्यहाँ विभिन्न बजेट र यात्रुहरूका प्रकारहरूका लागि विभिन्न प्रकारका SNCB टिकटहरू छन्. तपाईं पहिलो वा दोस्रो श्रेणीको लागि मानक टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ. उदाहरण को रुपमा, दोस्रो कक्षा लामो यात्रा को लागी राम्रो सूट हुनेछ र बजेट यात्री. तर यदि तपाइँ तपाइँको खुट्टा फैलाउन ठाउँ खोज्दै हुनुहुन्छ वा तपाइँ एक व्यापार यात्री र तपाई यात्रा गर्दा काम गर्न चाहानुहुन्छ, त्यसो भए पहिलो कक्षा तपाईका लागि उपयुक्त छ.
त्यहाँ एक SNCB सदस्यता छ?
बेल्जियमका नागरिकहरूका लागि, सदस्यताका विभिन्न प्रकारहरू छन्, असीमित सीजन टिकट, र मानक सीजन. अन्तर्राष्ट्रियहरूका लागि हामी लामो समय अग्रिममा किन्न सल्लाह दिन्छौं र त्यसपछि तपाईंसँग सस्तो विकल्प हुनेछ.
दुबै कार्डहरू खरीद गर्न सकिन्छ:
– SNCB टिकट काउन्टर.
– SNCB अनुप्रयोग.
मानक SNCB टिकटहरू:
मानक टिकट सबैभन्दा लचिलो ट्रेन टिकट हो जुन SNCB ले प्रस्ताव गर्दछ. यसरी, तपाईं बेल्जियमको कुनै पनि ठाउँमा मानक रेल टिकटको साथ यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ. तपाईंले नोट गर्नु पर्दछ कि मानक टिकटहरू अनलाइन किन्नुभयो, प्रतिपूर्ति गर्न सकिदैन. यद्यपि, यदि योजनाहरूमा परिवर्तन भएको छ भने, तपाईं टिकट काउन्टरमा टिकट फिर्ती वा विनिमय गर्न सक्नुहुनेछ. साथै, यो सेवा उपलब्ध छ, तपाईंको प्रस्थान मिति भन्दा एक दिन अघि, वा को लागी 30 मिनेट पछि तपाईंले टिकट किन्नुभयो.
ठुलो परिवार टिकट
परिवारका सबै सदस्यहरूले SNCB टिकटहरूमा ठूलो छुटको मजा लिन सक्छन्. उदाहरणका लागि, अन्तर्गत बच्चाहरु 12 नि: शुल्क यात्रा, र माथि 50% वयस्क र अधिक बच्चाहरूको लागि मानक टिकटहरूमा 12. यसबाहेक, यस टिकटको साथ, तपाईं सबै SNCB रेलहरूमा यात्रा गर्न सक्नुहुनेछ.
यो कार्ड एक फोटो परिचय पत्रको साथ संयोजनमा मान्य छ, जसमा होल्डरको उमेर समावेश हुनुपर्छ.
मानक सीजन टिकट
बेल्जियमका नागरिकहरूले मानक सीजन टिकट किन्न सक्छन्, र समान मार्गमा असीमित यात्राहरूको मजा लिनुहोस्. अर्को शब्दमा, को मूल्य को लागी 10 महिना सदस्यता, तिनीहरू दुबै दिशात यात्रा गर्न सक्दछन् जति पटक उनीहरू चाहन्छन्.
सप्ताहन्त टिकट वैध शुक्रवार - आइतवार हो, एक 50% बेल्जियमको कुनै पनि गन्तव्यमा छुट. त्यसैले, मा सुरू7शुक्रबार दिउँसो, तपाईं जहाँसुकै पनि बेल्जियम यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, पहिलो वा दोस्रो कक्षामा. साथै, यी विशेष सर्तहरू मा विस्तार सार्वजनिक विदा साथै.
ब्रसेल्स लाई गेन्ट ट्रेन मूल्यहरु
एन्ट्वर्पलाई गेन्ट ट्रेन मूल्य
हेलेदेखि गेन्ट ट्रेन मूल्यहरू
ब्रन्टहरू गेन्ट ट्रेन मूल्यहरूमा
SNCB को प्रस्थान पहिले आउन कति समय?
सहि ठ्याक्कै गर्न गाह्रो छ, तर एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् सल्लाह दिनुहुन्छ कि तपाईं आउनुहुन्छ 30 तपाईको प्रस्थान समय भन्दा मिनेट पहिले. यस समय फ्रेमको साथ, तपाईंसँग आवश्यक चीजहरूको लागि किनमेल गर्न पर्याप्त समय हुन्छ तपाईंको रेल यात्रा बनाउनुहोस् सकेसम्म सहज.
SNCB ट्रेन समय सारिणी के हो??
तपाईं हाम्रो होमपेजमा वास्तविक-समयमा फेला पार्न सक्नुहुन्छ एक ट्रेन बचत गर्नुहोस् SNCB ट्रेन समय सारिणी, केवल तपाईंको हालको स्थान र इच्छित गन्तव्य टाइप गर्नुहोस्, र हामी तपाईंलाई जानकारी देखाउने छौं.
ब्रसेल्स को लागी ट्रेन मूल्यहरु
एन्ट्वर्प डाइनन्ट ट्रेन मूल्यहरू
डाइनन्ट ट्रेन मूल्यहरूमा गेन्ट
डाइनन्ट ट्रेन मूल्यहरूमा राख्नुहोस्
कुन स्टेशनहरु SNCB द्वारा सेवा गरीन्छ?
SNCB को ब्रसेल्स स्टेशन ब्रसेल्स हो – केन्द्रीय, जुन बेल्जियमको मुटुमा अवस्थित छ.
अर्को केन्द्रीय SNCB स्टेशन एन्ट्वर्प मा छ, SNCB ट्रेनहरू एन्ट्वर्प सेन्ट्रल स्टेशन बाट छुट्नुहोस् र आइपुग्नुहोस्, सुन्दर ब्लू एस्ट्रिड होटलको नजिक. एन्ट्वर्प सेन्ट्रल हो दोस्रो व्यस्त ट्रेन स्टेशन बेल्जियममा.
SNCB ट्रेनहरू गेन्टमा बाट छुट्छ गेन्ट सेन्ट पिटरहरू स्टेशन, जुन बेल्जियमको तेस्रो ठूलो शहर हो र फ्लान्डरमा सबैभन्दा ठूलो हो.
लीज, लीज Guillemins SNCB केन्द्रीय रेलवे स्टेशन हो. त्यसैले, लीज रेल स्टेशन बेल्जियमलाई छिमेकी देशहरूमा जोड्दछ, यसलाई वालोनियाको सबैभन्दा व्यस्त ट्रेन स्टेशनहरू बनाउने. यसबाहेक, यदि तपाईं जर्मनी यात्रा गर्ने योजना गर्दै हुनुहुन्छ, फ्रान्स, लक्समबर्ग, वा बेल्जियमबाट नेदरल्याण्ड्स, तपाईं पहिले नै आफ्नो SNCB ट्रेन टिकट आरक्षित गर्न चाहानुहुन्छ.
प्रयोग गरियो (Bruge – अर्को लोकप्रिय भाषामा उही शहरको नाम) रेलवे स्टेशन फ्लान्डरमा अर्को व्यस्त SNCB रेल स्टेशन हो. उदाहरणका लागि, Bruges बाट, तपाईं आफ्नो ट्रेन टिकट अर्डर गर्न सक्नुहुनेछ लोकप्रिय गन्तव्यहरू बेल्जियममा: घेंट, एन्टवर्प, र एक घण्टा भन्दा कममा ब्रसेल्स. Bruges रेल स्टेशन एक मा छ 20 बाट मिनेट पैदल दूरी शहर केन्द्र, र सुन्दर ओल्ड सिटी मार्केट स्क्वायर.
Leuven मा SNCB रेल स्टेशन बेल्जियमको फ्लेमिश ब्राभान्ट क्षेत्रको मुख्य रेल स्टेशन हो. यो व्यस्त रेल स्टेशन फ्लेमिस क्षेत्रलाई अन्य क्षेत्रहरूसँग जोड्छ र शीर्ष मध्ये एक हो5बेल्जियममा व्यस्ततम रेल स्टेशनहरू. यसरी, तिमी सक्छौ train travel ब्रसेल्स गर्न, ब्रसेल्स एयरपोर्ट, Leuven, एन्टवर्प, र मूलतया बेल्जियमको कुनै पनि शहर.
मेचेलेन वा मालिनास, मेचेलेन शहर मा, बेल्जियमको एक केन्द्रीय एसएनसीबी ट्रेन स्टेशन पनि हो. तपाईं यहाँ पाउनुहुनेछ 10 प्लेटफार्महरू, इन्टरसिटी ट्रेन लाइनहरु सेवा दिँदै, एन्ट्वर्पबाट ब्रसेल्स एयरपोर्ट सहित. साथै, तपाईं एम्स्टर्डममा आफ्नो SNCB टिकट खरीद गर्न सक्नुहुनेछ, र लक्जमबर्ग, एन्ट्वर्प र ब्रसेल्स मार्फत.
बाइक बोर्डमा अनुमति छ SNCB ट्रेनहरू?
बाइकहरूलाई SNCB ट्रेनहरूमा अनुमति छ. यदि तपाईंसँग एक फोल्डेबल बाइक छ, त्यसोभए तपाईं त्यसलाई रेलमा चढ्न सक्नुहुन्छ, कुनै शुल्क बिना. यद्यपि, बाइकका अन्य प्रकारहरूको तपाईंको ट्रेन टिकटको लागि € lement पूरक खर्च हुनेछ.
बच्चाहरू SNCB ट्रेनहरूमा निःशुल्क यात्रा गर्छन्?
हो, तर केवल एक निश्चित उमेर सम्म. बच्चाहरू जुन उमेर भन्दा कम उमेरका छन् 12 वयस्क यात्रीको साथ जब यात्रा नि: शुल्क हुनेछ.
SNCB ट्रेनहरूमा घरपालुवा जनावरहरूलाई अनुमति छ?
हो, तपाईं रेल मा आफ्नो घरपालुवा जनावर ल्याउन सक्नुहुन्छ, प्रति यात्रा €3को लागी. यद्यपि, घरपालुवा जनावर सिसामा वा झोलामा हुनुपर्छ, वा टोकरी.
SNCB का लागि बोर्डिंग प्रक्रियाहरू के हुन्??
सर्वाधिक अनुरोध गरिएको SNCB FAQ – के मैले SNCB मा अग्रिम सिट अर्डर गर्नु पर्छ??
तपाईं सक्छ रिजर्भaमलाई थाहा छमा अग्रिम घरेलु मा SNCB रेलहरू. तपाईं हुनेछ व्यक्तिगत प्राप्त गर्नुहोस् सीट आरक्षण गरे पछि, तर यो आवश्यक छैन.
त्यहाँ SNCB भित्र Wi-Fi इन्टरनेट छ??
कुनै. त्यहाँ छैन मुक्त वाइफाइ SNCB ट्रेनहरूमा इन्टरनेट. तपाईं SNCB रेलवे स्टेशनहरूमा नि: शुल्क Wi-Fi का मजा लिन सक्नुहुनेछ.
यदि तपाईंले यो पोइन्ट पढ्नु भएको छ भने, अब तपाईंलाई थाहा छ तपाईंलाई आफ्नो SNCB ट्रेनहरूको बारेमा जान्न आवश्यक पर्दछ र तपाईंको SNCB ट्रेन टिकट खरीद गर्न तयार हुनुहुन्छ एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्.
NSB Vy नर्वे SBB स्विजरल्याण्ड
के तपाइँ यस पृष्ठलाई तपाइँको साइटमा इम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ?? यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/embed/https%3A%2F%2Fwww.saveatrain.com%2Fblog%2Ftrain-sncb%2F%3Flang%3Dne- (को एम्बेड कोड हेर्न तल स्क्रोल), वा तपाइँ केवल यस पृष्ठमा सीधा लिंक गर्न सक्नुहुन्छ.
तपाईं आफ्नो प्रयोगकर्तालाई दयालु हुन चाहनुहुन्छ भने, तपाईं हाम्रो खोज पृष्ठ मा सिधै तिनीहरूलाई मार्गदर्शन गर्न सक्छन्. यो लिंक मा, तपाईं हाम्रो सबै भन्दा लोकप्रिय रेल मार्गहरू पाउनुहुनेछ – https://www.saveatrain.com/routes_sitemap.xml. तपाईं अंग्रेजी अवतरण पृष्ठ को लागि हाम्रो लिंक भित्र, तर हामी पनि छ https://www.saveatrain.com/fr_routes_sitemap.xml र तपाईं / fr लाई / nl वा / es र अधिक भाषाहरू परिवर्तन गर्न सक्नुहुनेछ.